ABAZALI bezingane ezifunda e-Sobantu Secondary School bafuna uMnyango wezeMfundo uphenye kabanzi ngezinsolo zokuthandana kwabafundi nabanye bothisha kulesi sikole.
Uthe: “Ukuthandana kothisha nabafundi into endala kulesi sikole ngoba kukhona nabanye asebaze bahamba kulesi sikole.
“Kunezingane ezazifunda la esezinezingane nazo ezisolwa kwabanye balabo thisha.
“Besithule ngoba phela kuyinto eyihlazo, kodwa siyabona ukuthi awenzeki umehluko.
“Ngisho ufika kona uyabona ukuthi ubudlelwano obukhona phakathi kwabafundi nabanye othisha besilisa buhlukile indlela abajwayelene ngayo.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal uMnu Sihle Mlotshwa uthe: “Lokhu sikuthatha njengezinsolo ezibucayi. Siyanxusa noma kubani ongaba nolwazi ukuba aphumele obala ukuze sithathe izinyathelo ezifanele.
“Ukuziphatha ngendlela engavumelekile kungaholela nasekutheni labo abasolwayo balahlekelwe imisebenzi. Othisha bangababazali futhi kumele babe yizibonelo ezinhle kubafundi. Akumele kube ibona abagcina sebecuthela izingane ezingenacala.”